Gabar 12 jir Soomaali ah oo Schoolkeeda looga buriyay in ay ku adagtahay diinteeda. | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Gabar 12 jir Soomaali ah oo Schoolkeeda looga buriyay in ay ku...
Gabar 12 jir Soomaali ah oo Schoolkeeda looga buriyay in ay ku adagtahay diinteeda.
Sihaam Idiris Schoolkii ay dhiganeysay waxaa loogu buriyay in ay noqotay qof ku adag diinteeda
Sihaam oo 12 jir ah aya diiday in ay qaadato goonada madow ee gaban oo jilbaha ka kore la eg.
Waxay ku nooshahay Uk 🇬🇧 balse maamulka School ka ayaa hadda maxkamad ka dawceyay Idirs Xaamud oo ah aabaha dhalay Sihaam .
Maamulka School ka ayaa ku eedeyay Idiris in gabadhiisa uu ku bar baariyay xagjirnimo iyo ad adeeg ku saabsan qaadashada Hijabka.
Sihaam mudda bil ah School ka ma aadin goonada gaaban in ay qaadata waxay ka door biday in ay joojiso gabi ahaan wax barashada School ka.
Dadka sadaaliyay guusha maxkamda cida qaadi doonto dhamaantood waxay isku raacen in Sihaam go’aankeda uu yahay mid wngsn iyadana ay qaadi doonta guusha Maxkamada.!
Tarbiyada guriga aye ubadka latagaan bulshada dhaxdeeda Say Masha Allah Sihaam Idirs ❤️🙏
W/Q Zakaria Mohamud Tima Ade ✍️
Previous articleDeg Deg:- Fanaanadii caanka aheyd ee Qaali Ladan oo fanka isaga baxday.
Next articleFanaanada Sacdiyo Simen oo sheegtay in ay isaga baxday fanka.